Einstein | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on May 11, 2015 by chitnge
Einsteinအကြောင်းတစေ့တစောင်း THE SPECIAL and General Theories of Relativity စာစုကို ရေးသားခဲ့သော Albert Einstein သည် ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် (1879) ခုနှစ်က မွေးဖွားခဲ့သည်။ Einstein သည် (1905) ခုနှစ်တွင် စာတမ်း (၃) စောင် ပြုစုရေးသားခဲ့ရာ ကမ္ဘာ၌ ဦးဆောင်သော သိပ္ပံပညာရှင် အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် လူတို့၏ အချိန်နှင့် ကာလ၊ ဌာန အပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ အမှန်တရား အပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ အယူအဆ တော်တော်များများအား … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Einstein, Hawking, Quantum Mechanics	| Leaveacomment
The Meaning of Probability Once Einstein said that “the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible.” This means universe can be understood by human beings. Einstein believed in natural laws. So he stated that “God … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Einstein, English Posts	| Leaveacomment
Why I like Hawking?
Posted on May 29, 2014 by chitnge
ဟော့ကင်းနာမည်ကြီးရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းများ Why I like Hawking? ဟော့ကင်းသည် သူ၏ရဲရင့်သော အယူအဆများကြောင့် နာမည်ကြီးလာရသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ သူသည် သူ့၏ သုတေသနလုပ်ငန်းမှ ရရှိသောအဖြေကို ရဲရဲရင့်ရင့် ထုတ်ဖော်တင်ပြရဲခဲ့သည်။ အောက်ပါ အယူအဆတစ်ခုကို ကြည့်ပါ — Hawking is one of the famous theoretical physicists. After Einstein, he became the most famous scientist. At the time … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged BLACK HOLE, Einstein, English Posts, Hawking	| Leaveacomment